Komishanka Yurub waxay u ansixiyeen MEB inay tahay walxo sharci ah oo loogu talagalay qurxinta iyo daryeelka maqaarka • daroogada Inc.eu
Guddiga Yurub ayaa ku dhawaaqay cannabigerol (CBG) ayaa lagu daray keydka walxaha qurxinta ee EU (oo loogu magac daray "Cosing"), taasoo ka dhigaysa xarunta mid nabdoon oo loo isticmaali karo alaabada caafimaadka iyo quruxda.
Soosaarayaasha yurub ee caafimaadka iyo quruxda badeecada hada waxay si badbaado leh ugu isticmaali karaan cannabigerol ama CBG hemp ka soo qaadashada isku qurxinta iyo khadadka daryeelka maqaarka iyadoo laga ogolaanayo maamule suuqeed weyn oo ka ganacsada Midowga Yurub.
Isbeddelka kala-saaridda waxaa sameeyay Agaasinka Guud ee Midowga Yurub ee Suuqa Gudaha, Warshadaha, Ganacsi iyo Shirkadaha SMEs (shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah).
CBG wuxuu la shaqeeyaa CB1 iyo CB2 endocannabinoid receptors, kuwaas oo ku yaal maqaarka. Taageerayaashu waxay yiraahdaan xarunta hemp-ka soo baxday waxay leedahay astaamo anti-bararka, bakteeriyada, iyo antioxidant oo ka caawiya nidaamka endocannabinoid inuu ilaaliyo shaqada maqaarka caafimaadka leh.
Marka CBG gaarto epidermis-ka, wuxuu dhex galayaa lakabyada asaasiga ah iyo kuwa hoose ee maqaarka halkaasoo ay ka caawiso dejinta caabuqa, yareynta nijaasta, daloolada nadiifka ah, dheellitirka wax soo saarka saliidda iyo hagaajinta wareegga unugyada.
Isticmaalka Cannabigerol ama CBG oo ka soo baxa hemp ee isku-qurxinta iyo khadadka daryeelka maqaarka (afb.)
CBG waa 'Hooyo' cannabinoid
CBG waxaa loo yaqaan 'hooyada' ama 'OG' cannabinoid sababtoo ah xaqiiqda ah inay tahay mid horudhac u ah dadka kale oo dhan cannabinoids sida CBD (Cannabidiol), CBN (Cannabinol), CBC (Cannabichromene), THC en THCA (Tetrahydrocannabinoleic Acid).
Si dabiici ah ayaa loo soo saaray CBD, oo lagu daray keydka xogta ee loo yaqaan 'Cosing database' horaantii sanadkaan, iyo CBD-da loo yaqaan 'synthetic CBD', ayaa sidoo kale loo oggolaaday in lagu isticmaalo qurxinta EU-da, sida caleemaha hemp.
In kasta oo daneeyayaasha xashiishadda ay muddo dheer horumarinayeen THC iyo CBD, soosaarayaasha, cilmi baarayaal, iyo kuwa beera xashiishka waxay billaabeen baaritaanka CBG dhowr sano ka hor. Kiciyeyaasha ayaa tan iyo markii ay soo saareen noocyo kala duwan oo CBG-hodan ku ah.
Ilaha ay ka mid yihiin HempHealthy (EN), Hemp Warshadaha (EN), HempToday (EN)
cbgis qurxintaEuropacaafimaad lehcaafimaadkaxagashasaliid hempmaqaarkasharci-dejintasharciga
Sababtoo ah René wuxuu rabaa in lagu xukumo koritaanka cawska
René Barendse oo ka socda Naaldwijk ayaa doonaya inuu caddeeyo cadaaladda: miyay u xanuun kartaa dhabarka ...